6 bog oo loogu talagalay in lagu naqshadeeyo dib u soo celinta qadka | Abuurista khadka tooska ah
6 bog oo loogu talagalay in lagu naqshadeeyo qadka tooska ah
Ma waxaad raadineysaa bedel internet ah oo aad abuurto Khadka tooska ah wuxuu dib ugu bilaabayaa qaab deg deg ah, qaab fudud iyo helitaanka natiijo wanaagsan? Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago xul bogag internet ah oo adeegyo bilaash ah lagu bixiyo si loogu sameeyo dukumiintiyadan qaab web iyo qaab dhaqameed.
Dabcan, waxaan kugula talineynaa inaad ku shaqeyso nashqaddaada iyo soo-jeedintaada haddii aad la kulanto habka xulashada gudaha laan kasta oo farshaxan ah. Aniga oo aan ku sii dheeraan, halkan ayaan kaaga tagayaa lix xulasho oo aad u soo jiidasho leh:
1 DoYouBuzz: Nadiifi dib u bilaabida qadka daqiiqadaha
2 Tusaalooyinka Asalka ah: Ku dhis CV-gaaga adoo adeegsanaya ilaha internetka
3 CV Visual: Cilmiga iyo daryeelka aragga
4 OnlineCV: Ilaa heer
5 CV Audere: Toos ah oo aan dhib lahayn
XayooRenka: Nadiifi qadka tooska ah daqiiqado kadib
Tani waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad raadineyso inaad abuurto resumeygaaga adigoon dhibaatooyin badan qabin oo aad hesho natiijo la aqbali karo. Awoodaheeda waxaa ka mid ah suurtagalnimada ku abuur CV qaab web, qaab PDF ah iyo waliba qaab jawaab leh sidaa darteed waxaa lagu ciyaari karaa nooc kasta oo qalab ah. Fududaynta hawshu waxay ku jirtaa adeegsiga qaab-dhismeedyo nadiif ah oo nadiif ah oo ixtiraamaya baahiyaha iyo qaab-dhismeedka soo jireenka ah ee resume mar walba. Dhinaca kale, waxaan sidoo kale ka heli karnaa aragti muuqato shabakadda iyada oo loo marayo maareynta maaddaama ay maamusho isku xirka shaxankaaga shabakadaha bulshada sida Facebook, Google, Linkedin ama Twitter. DoYouBuzz waxay leedahay laba qaab, mid bilaash ah iyo mid kale oo caymis ah oo bil walba la bixiyo of 40 sanadkii. Qaabkeeda bilaashka ah, waxay si dabiici ah u bixisaa tiro badan oo ah astaamo iyo xulashooyin iyo waliba astaamo, inkasta oo koontada aasaasiga ah aad ku heli karto adeegyada lagama maarmaanka u ah abuurista iyo qaabeynta dib-u-soo-jiidashada soo jiidashada leh isla markaana kula wadaagi karto shabakadda.
Qaababka Asalka ah: Ku dhis resume kuu gaar ah ilaha internetka
Thanks to bangiyada kala duwan ee ilaha sawirada, waxaan ku heli karnaa soo bandhig aad u wanaagsan oo ku saabsan dib u soo celintayada iyada oo aan waqti dheeri ah ku qaadan. Mid ka mid ah bangiyadan ayaa ah Sawirqaade taasi waxay na siisaa noocyo kala duwan oo arrimo ah oo dib loogu bilaabayo qiime aad u hooseeya taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan wax ka bedelno oo aan ku qaabeyno goolal aad u yar
Muuqaal CV: Dareennimo iyo daryeel muuqaal ah
Guud ahaan, markaan wax ka bedelno resume-ka meesha ugu horeysa waxaan inta badan ka shaqeynaa qeybta muuqaalka ah. Waxaan abuurnaa oo aan cabirnaa sanduuqyada qoraalka, u xilsaarnaa aagag midab leh oo aan u xisaabeynaa meelaha si aan hadhow u bilowno buuxinta shaxdeena. Si kastaba ha noqotee, iyada oo loo marayo Visual CV waxaan wax ka beddeli karnaa muuqaalka muuqaalka wakhti kasta, xitaa ka dib marka aan galno xogta qoran. Waa nidaam in waxay si buuxda ula qabsaneysaa shaqada aad horumarineyso taasna waxay ku siinaysaa faa iidooyin aad u badan marka la eego waqtiga iyo bilicsanaanta. Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo tayo sare leh, inkasta oo dabcan labadaba tayada iyo tirada (moodeellada iyo dejimaha) ay kordhayaan marka aan dooranno nooca ugu sarreeya. Beddelkan waxaa lagu heli karaa 8 luqadood sidaa darteed waxaad ku shaqeyn kartaa Ingiriis haddii aad rabto ama luqad kale. Waxa kale oo ku jira aag u heellan dib-u-soo-celinta ugu guulaha badan ee bulshada isticmaaleha.
OnlineCV: Toos u barta
Waa midka ugu shaqeynaya uguna toosan dhammaan xulashooyinka aan kuu soo qaato maxaa yeelay waxay diiradda saaraysaa shuruudaha aasaasiga ah ee resume-ka. Iyada oo loo marayo OnlineCV waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku helno manhaj si fiican u qaabeysan, sax ah, bash-bash ah iyo manhaj caadi ah, kana tanaasulay dhammaan noocyada kala-soocyada iyo qurxinta faaiidada leh. Hawlgalku waa mid aad u dhaqso badan: Waad galeysaa, galaysaa dhammaan xogtaada shaqsiyeed, tacliimeed iyo shaqo kadib waxaad ubaahantahay oo kaliya inaad soodejiso resumeygaaga qaab PDF ah. Waxay ku habboon tahay dhammaan kuwa wax ku ool ah ama doorta xirfado farsamo oo dheeri ah oo aan wax badan ku lahayn deegaanka farshaxanka.
Dib u bilaw Audere: Toosan oo aan dhib lahayn
Si la mid ah doorashadii hore, CV Audere ma fiirinayo nashqadda CV-yadii asalka ahaa ama qayb muuqaal weyn leh waxayna diiradda saarayaan dhinaca farsamada, shaqada iyo qaabka caadiga ah, in kasta oo dhanka kale laga helo xoogaa xoog ah. . Tusaale ahaan, boggan wuxuu na siinayaa macluumaad badan oo leh wax kasta oo la xiriira howlaha xulashada, sida wareysiyada shaqada. Sidoo kale raacitaanka xariiqda waxqabadka, Xitaa waxay na siisaa suurtagalnimada inaan ka dalban karno bogga laftiisa tiro gaar ah oo nuqullo ah ama nuqullo ah si loo daabaco. Tani lafteeda horeyba waxay u dhigantaa habka lacagta caymiska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 6 bog oo loogu talagalay in lagu naqshadeeyo qadka tooska ah
Angel Javier Valdivieso dijo
Asal ahaan maya?
Jawaab Ángel Javier Valdivieso
Dib -u -goynta dijo
Aad u xiiso badan!! qaar ka mid ah oo leh sheylo aad u qabow :)
Ku jawaab Remacomputing
Haha Poupou ayaa soo bandhigeysa goos gooska kaftanka ah ee filimka cusub ee Star Wars ee ay la wado Sonata